BitTorrent Sync ho an'ny iOS dia ahafahanao mampifanaraka ny fisie amin'ny fitaovana | Vaovao IPhone
Azo antoka fa ny ankamaroanareo mahalala an'i BitTorrent, iray amin'ireo mpanjifa torrent malaza indrindra, ny rafitra fizarana rakitra P2P. BitTorrent Sync dia rindranasa vaovao izay mifototra amin'ity serivisy P2P ity hahafahana mampifandray ireo rakitra eo anelanelan'ny fitaovana na dia amin'ny olon-kafa aza. Misaotra fa manana rindranasa ho an'ny Windows, Mac OS X, iOS ary Android izy io, mahafinaritra be ireo azo atolotra azy. Adinoy ny fandefasana lampiranana amin'ny alàlan'ny mailaka, na ny fampiasana kitay USB hamindrana vaovao avy amin'ny fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa. Ary manana tombony ihany koa izany ny fampifanarahana dia mivantana, tsy misy mpizara, Ka tsy misy fetran'ny habe na haben'ny rakitra, ary tsy mila mandoa sarany isam-bolana ihany koa ianao mba hitahiry fitehirizana bebe kokoa. Atorinay anao ny fomba fiasan'izany.
Ny fampiharana dia miasa eo anelanelan'ny fitaovana apetraka aminy. Maimaimpoana ny kinova rehetra amin'ny fampiharana, ary azonao atao ny misintona azy ireo avy amin'ny pejy ofisialy BitTorrent Sync, na avy amin'ny App Store amin'ny tranga iOS. Ny mampalahelo dia mbola tsy namboarina ho an'ny efijery iPad izy, saingy mandeha tsara izy io, ka antenaina fa hisy fanavaozana amin'ny ho avy hampifanaraka azy, fa azontsika ampiasaina izany izao. Azavainay ny fomba fizarana rakitra eo anelanelan'ny solosaina sy ny iPad, ary ny fomba fanaovana azy amin'ny iPhone mankany amin'ny iPad.
1 Mizarà amin'ny solosaina mankany iPad
2 Mizarà amin'ny iPhone ka hatramin'ny iPad
Mizarà amin'ny solosaina mankany iPad
Ny zavatra voalohany dia ny fametrahana ary amboary ny rindrambaiko amin'ny solosaina. Dingana tena tsotra izany. Vantany vao vita io dia hiseho miaraka amin'ny lahatahiry rehetra nozarainay ny varavarankely. Raha hizara azy amin'ny iPad dia tsindrio ny bokotra ankavanana ary safidio ny "Connect mobile device".
Avy eo a QR code fa tsy maintsy jerentsika amin'ny fakantsary an'ny iPad, mivantana avy amin'ny fampiharana BitTorrent Sync ho an'ny iOS. Azontsika atao ihany koa ny misafidy raha te hanana fidirana feno amin'ny fisie na mizara azy io amin'ny famakiana fotsiny.
Avy amin'ny rindranasa ho an'ny iOS, mifidy «Manampia fampirimana fampifanarahana» izahay, ary avy eo dia tsindrio ny «Scan QR code»
Ny fampiharana dia hahamarika ny kaody QR eo amin'ny efijeran'ny solosaintsika, ary afaka tsindrio "Done" isika izao eo amin'ny zoro havanana ambony.
Efa manana ny fampirimana amin'ny fitaovantsika isika. Raha tsindrio ny zana-tsipìka ankavanana isika dia afaka misafidy fa mandeha ho azy ny fampifanarahana. Ao amin'ny menio Settings dia afaka misafidy ihany koa isika raha te hampiasa ny tamba-jotra angona izahay na amin'ny WiFi ihany, izay no tena atoro anao.
Ny fisie izay ananako ao amin'ny folder Mac dia avy eo miseho amin'ny iPad-ko, ary azoko atao ny mijery azy amin'ny rindrambaiko.
Mizarà amin'ny iPhone ka hatramin'ny iPad
Mora be ny fizarana sary na horonantsary avy amin'ny iPhone mankany iPad. Ao amin'ny menio "Alefaso rakitra", safidio ny "Inona ireo rakitra tianao halefa?" ary safidio izy ireo. Vantany vao vita izany dia hiseho ny kaody QR izay tsy maintsy ataontsika scan miaraka amin'ilay fampiharana amin'ilay fitaovana kendrena.
Tsy maintsy miditra amin'ny menio «Alefaso fisie» ihany koa isika fa safidio izao «Raiso ireo rakitra«, Hanafohezana ny kaody ary hanomboka avy hatrany ny famindrana.
Ny fampiharana mandamina ny lahatahiry izay itehirizany ny fisie ho azyArak'izany, ireo lahatahiry misy rakitra voaray avy amin'ny telefaona finday dia tafasaraka amin'ireo lahatahiry nifanarahanao tamin'ny solosainao.
Betsaka ny fahafahan'ny BitTorrent Sync, mamela anao aza izy io manao nomaniny ho solon'izay mandeha ho azy avy amin'ny horonan-taratasy ny iPhone na iPad mankany amin'ny fampirimana amin'ny solosainao, amin'izay dia voatahiry ao amin'ny solosainao hatrany ny sarinao rehetra tsy mila mirindra, tsy mahatadidy akory ny hanavotana azy ireo. Izahay dia hanazava asa vaovao aminao rehefa manandrana ity fampiharana mahafinaritra ity izahay.
Tsy ao amin'ny App Store intsony ilay fampiharana]
Fanazavana fanampiny - PhotoSync dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » BitTorrent Sync ho an'ny iOS dia mamela anao handrindra rakitra amin'ny fitaovana rehetra